ဘုရားသခင်နှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်း - ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘုရားကျောင်း
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ 2019-03 > ဘုရားသခင်နှင့်အတူမိဿဟာယ
ခရစ်ယာန်နှစ် ဦး သည်သူတို့၏ချာ့ချ်များအကြောင်းအချင်းချင်းပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ စကားစမြည်ဝိုင်းများအတွင်း၎င်းတို့သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကသက်ဆိုင်ရာအသိုင်းအဝိုင်းများတွင်ရရှိခဲ့သည့်အကြီးမြတ်ဆုံးအောင်မြင်မှုများကိုနှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။ သူတို့ထဲကတစ်ယောက်က“ ကားရပ်နားမယ့်အရွယ်အစားကိုနှစ်ဆတိုးလိုက်တယ်” လို့ပြောခဲ့တယ်။ အခြားတစ် ဦး ကမူ“ ငါတို့ကစီရင်စုခန်းမထဲမှာအလင်းအသစ်တွေတပ်ထားတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ခရစ်ယာန်များသည်ဘုရားသခင့်အမှုတော်ဆောင်ခြင်းဟုယုံကြည်သောအရာများကိုပြုလုပ်ရာတွင်အလွယ်တကူပါ ၀ င်နိုင်ပြီးဘုရားသခင်အတွက်အချိန်သိပ်မကျန်တော့ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး စားပေး
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏မစ်ရှင်မှ အာရုံလွဲနိုင်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းတော်ဝန်ဆောင်မှု (လိုအပ်သော်လည်း) အလွန်အရေးကြီးသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကဏ္ဍများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပြီး ဘုရားသခင်နှင့် မိတ်သဟာယဖွဲ့ရန် အချိန်အနည်းငယ်သာ ကျန်ရှိတော့မည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်အတွက် ရှုပ်ယှက်ခတ်နေသော လုပ်ဆောင်မှုများတွင် အလုပ်များနေချိန်တွင် ယေရှုပြောခဲ့သည့်စကားကို အလွယ်တကူ မေ့သွားနိုင်သည်– “အမင်္ဂလာရှိသော ကျမ်းပြုဆရာ၊ ဖာရိရှဲများ၊ ပိတောက်ပင်၊ ဇီယာစေ့နှင့် ကာရဝေးစေ့များကို ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ကို လျှို့ဝှက်ထား၍ ပညတ်တရားတွင် အရေးကြီးဆုံးအရာဖြစ်သည့် မှန်သောကရုဏာ၊ ယုံကြည်ခြင်း! အကြင်သူသည် ဤသို့ပြု၍ မထားခဲ့သင့်” (မဿဲ ၂3,23).
ကျမ်းတတ်များနှင့်ဖာရိရှဲများသည်ပovenိညာဉ်ဟောင်း၏တိကျခိုင်မာသည့်စံနှုန်းများအောက်တွင်နေထိုင်ခဲ့သည်။ တခါတရံကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအရာကိုဖတ်ပြီးထိုလူများ၏ပါးနပ်သောတိကျမှန်ကန်မှုကိုပြက်ရယ်ပြုသော်လည်းယေရှုကမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းမပြုပါ။ သူကသူတို့ကိုဖယ်ဒရယ်အစိုးရလုပ်ခိုင်းခိုင်းတယ်။
သခင်ယေရှု၏ဆိုလိုရင်းမှာပdetailsိညာဉ်ဟောင်းအောက်၌နေထိုင်သူများအတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များမလုံလောက်ခြင်းကြောင့်နက်ရှိုင်းသော ၀ ိညာဉ်ရေးရာပြissuesနာများကိုလျစ်လျူရှုသောကြောင့်သူသည်သူတို့ကိုအပြစ်တင်ဆုံးမသည်။ ခရစ်ယာန်များအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခမည်းတော်၏လုပ်ငန်းတွင်အလုပ်များနေသင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပေးကမ်းမှု၌ရက်ရောမှုရှိသင့်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဆောင်မှုများအားလုံး - ယေရှုခရစ်နောက်လိုက်ခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်သောကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဆောင်မှုများတွင်ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဘုရားသခင်ခေါ်တော်မူခြင်း၏အကြောင်းပြချက်ကိုလျစ်လျူရှုမထားသင့်ပါ။
ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ကို ခေါ်တော်မူသည်ဖြစ်၍၊ “ထာဝရအသက်ဟူမူကား၊ ကိုယ်တော်သည် အဘယ်သူဖြစ်သည်ကို စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တည်းဟူသော၊ စေလွှတ်တော်မူသော ယေရှုခရစ်တည်းဟူသော ကိုယ်တော်ကို သူတို့သိကြသည်” (ယော ၁း၁)။7,3) ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ လာရန် ကျွန်ုပ်တို့ လျစ်လျူရှုထားသောကြောင့် ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်နှင့် အလွန်အလုပ်များနေပါသည်။ လုကာက မာသနဲ့ မာရိရဲ့အိမ်ကို “မာသ အလုပ်ရှုပ်နေတယ်” လို့ ယေရှု လည်ပတ်တုန်းက အဖြစ်အပျက်ကို ပြောပြတယ်။ (လုကာ၊ 10,40) Marta ၏ လုပ်ရပ်များတွင် အမှားအယွင်းမရှိသော်လည်း၊ မာရိသည် အရေးကြီးဆုံးအရာကို လုပ်ဆောင်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်- ယေရှုနှင့် အချိန်ဖြုန်းရန်၊ သူ့ကို သိကျွမ်းပြီး နားထောင်ပါ။
အသိုင်းအဝိုင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ထံမှဘုရားသခင်အလိုရှိသည့်အရေးအကြီးဆုံးအရာဖြစ်သည်။ သူကကျွန်ုပ်တို့ကိုသူနှင့်ပိုသိကျွမ်းစေပြီးသူနှင့်အတူနေလိုသည်။ ယေရှုကသူ့အဖေနှင့်အတူရှိရန်သူ၏ဘဝအရှိန်အဟုန်ကိုနှေးကွေးစေသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့ကိုဥပမာပေးခဲ့သည်။ သူသည်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သည့်အချိန်ကာလ၏အရေးကြီးပုံကိုသိပြီးဆုတောင်းရန်တောင်ပေါ်သို့မကြာခဏသွားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးတွင်ရင့်ကျက်လာသည်နှင့်အမျှဘုရားသခင်နှင့်ဤတိတ်ဆိတ်သောအချိန်သည် ပို၍ အရေးကြီးလေဖြစ်သည်။ သူနဲ့တစ်ယောက်တည်းနေဖို့မျှော်လင့်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ အတွက်နှစ်သိမ့်မှုနှင့်လမ်းညွှန်မှုရရန်သူ၏စကားကိုနားထောင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အသိအမှတ်ပြုသည်။ ဆုတောင်းခြင်းနှင့်ကာယလေ့ကျင့်ခြင်းတို့တွင်ဘုရားသခင်နှင့်တက်ကြွစွာပေါင်းသင်းခြင်းကိုပေါင်းစပ်ခဲ့သည်ဟုကျွန်ုပ်အားရှင်းပြခဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး နှင့်မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ဤသို့သောဆုတောင်းခြင်းမျိုးနည်းပါးခြင်းကသူတို့၏ဆုတောင်းခြင်းဘ ၀ ကိုပြောင်းလဲစေလိမ့်မည်။ သူသည်ဘုရားသခင်နှင့်အတူလမ်းလျှောက်ရင်း - သူမအနီးအနားရှိသို့မဟုတ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၏အလှအပ၌သော်လည်းကောင်းလမ်းလျှောက်နေစဉ်ဆုတောင်းခဲ့သည်။
သင်သည်ဘုရားသခင်နှင့်မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်းကို ဦး စားပေးလုပ်ဆောင်ပါကသင်၏ဘဝတွင်အရေးတကြီးကိစ္စရပ်များအားလုံးသည်သူတို့ကိုယ်တိုင်ဂရုစိုက်ပုံရသည်။ သင်သည်ဘုရားသခင်ကိုအာရုံစိုက်သောအခါသူသည်သင့်အားအရာရာတိုင်း၏ ဦး စားပေးကိုနားလည်ရန်ကူညီပေးသည်။ သူတို့သည်ဘုရားသခင်နှင့်စကားပြောဆိုရန်အချိန်မရှိခြင်းနှင့်ဘုရားသခင်နှင့်မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်း၌အခြားသူများနှင့်အချိန်ဖြုန်းခြင်းတို့ကိုလျစ်လျူရှုသောလုပ်ဆောင်မှုများနှင့်အလွန်အလုပ်များနိုင်သည်။ သင်လုံးဝစိတ်ဖိစီးမှုခံရလျှင်၊ ပုံဥပမာဖယောင်းတိုင်ကိုမီးစွန်းနှစ်ဖက်စလုံးတွင်လောင်ကျွမ်းစေပြီးဘဝတွင်သင်လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာအားလုံးကိုသင်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုမသိပါ။ သင်၏ဝိညာဉ်ရေးအစားအစာကိုစစ်ဆေးသင့်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် မှန်ကန်သောမုန့်ကို မစားသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပူလောင်ပြီး ဝိညာဉ်ရေးဗလာဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်ပြောနေသော မုန့်အမျိုးအစားသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်ရေးကျန်းမာရေးနှင့် ရှင်သန်မှုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ ဤမုန့်သည် သဘာဝလွန်မုန့်ဖြစ်သည်- တကယ်တော့၊ ၎င်းသည် တကယ့် အံ့ဖွယ်မုန့်ဖြစ်သည်။ ပထမရာစုက ဂျူးတွေကို ယေရှုပေးခဲ့တဲ့ မုန့်နဲ့အတူတူပဲ။ ယေရှုသည် လူပေါင်း ၅,၀၀၀ အတွက် အံ့ဖွယ်နည်းဖြင့် အစာကျွေးခဲ့သည် (ယော 6,1စာ-၁၅)။ သူသည် ရေပေါ်တွင် လမ်းလျှောက်လာခဲ့ပြီး လူအုပ်ကြီးက သူ့ကို ယုံကြည်ရန် နိမိတ်တစ်ခု တောင်းဆိုနေသေးသည်။ သူတို့သည် ယေရှုအား ဤသို့ရှင်းပြခဲ့သည်– “ကျွန်ုပ်တို့၏ဘိုးဘေးများသည် ကျမ်းစာလာသည်အတိုင်း တော၌မန္နကိုစားကြသည် (ဆာလံ ၇။8,24) စားရန် ကောင်းကင်မှမုန့်ကို ပေးတော်မူ၏။” (ယော 6,31).
ယေရှုက “အကယ်စင်စစ် ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ မောရှေသည် သင်တို့အား ကောင်းကင်မုန့်ကို ပေးသော မောရှေမဟုတ်၊ ငါ့ခမည်းတော်သည် သင်တို့အား ကောင်းကင်မှ စစ်မှန်သောမုန့်ကို ပေးတော်မူ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ဤအရာသည် ကောင်းကင်မှဆင်းသက်၍ ဤလောက၌ အသက်ကိုပေးသော ဘုရားသခင်၏မုန့်ပေတည်း” (ယော 6,32စာ-၃၃)။ ဤမုန့်ကို သူတို့အား ပေးသနားရန် ယေရှုအား တောင်းဆိုပြီးနောက်၊ “ငါသည် အသက်မုန့်ဖြစ်၏။ ငါ့ထံသို့လာသောသူသည် ဗိုက်မဆာ။ ငါ့ကိုယုံကြည်သောသူသည် မည်သည့်အခါမျှ ရေငတ်လိမ့်မည်မဟုတ်” (ယောဟန် 6,35).
ဝိညာဉ်ရေးရာမုန့်ကိုမင်းအတွက်စားပွဲမှာဘယ်သူထားပေးတာလဲ။ သင်၏စွမ်းအင်နှင့်တက်ကြွမှုအားလုံး၏ရင်းမြစ်ကားမည်သူနည်း။ သင်၏ဘ ၀ ကိုအဓိပ္ပါယ်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ကိုဘယ်သူပေးသနည်း။ အသက်မုန့်ကိုသိရန်သင်အချိန်ယူသလော။